Anyị Rubere Isi ma Dịrị Ndụ Mgbe A Gwara Anyị Gbapụ n’Ihi Nsogbu E Nwere | Nwanna Blasius da Gomes
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1963
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1995
ONYE Ọ BỤ Ọ bụ okenye ọgbakọ nke lekọtara atụrụ Jehova n’oge e nwere ọgba aghara okpukpe n’Ambọn. Ambọn bụ otu n’ime agwaetiti e nwere n’Agwaetiti Maluku.
N’ABALỊ iri na itoolu n’ọnwa Jenụwarị afọ 1999, nghọtahie ndị Alakụba na Ndị Kraịst nwere bịaziri ghọọ tigbuo zọgbuo. Isi n’ụlọ m gaa n’ebe ọ malitere dị kilomita atọ. Ọ bụghịkwa obere nsogbu. *
Mgbe m kpọpụchara ndị ezinụlọ m, m kpọrọ ndị nkwusa ndị ọzọ n’ekwentị ka m mara otú ha mere. M gwara ha etinyela aka n’ọgba aghara ahụ nakwa ka ha ghara ịga ebe e nwere ọgba aghara. Mgbe e mechara, ndị okenye gakwuuru ụmụnna anyị gbaa ha ume ka okwukwe ha sikwuo ike, gwakwa ha ka ha na-ezukọta obere obere enwe ọmụmụ ihe.
Alaka ụlọ ọrụ gwara anyị kpọpụ nwanna ọ bụla bi n’ebe ndị a na-enwe ọgba aghara ahụ. Anyị gwakwara ụmụnna anyị ndị bi n’ebe ndị ahụ ka ha kwapụ. Ma, e nwere otu nwanna na-ekweghị akwapụ. Ọgba aghara ahụ mechakwara taa isi ya. Ma, ọkọ akọghị nwanna ọ bụla mere ihe alaka ụlọ ọrụ kwuru.
^ para. 1 E nwere tigbuo zọgbuo n’ebe niile na Maluku ruo ihe karịrị afọ abụọ. O mekwara ka ọtụtụ ndị hapụ ụlọ ha gbaa ọsọ ndụ.